LABO DARAN MID DOORO: Juventus oo laba go’aan hor dhigtay Alex Sandro – Gool FM
(Juventus) 22 Nof 2018. Sida laga soo xigtay wargeysyada gudaha dalka Talyaaniga kooxda Juventus ayaa hor dhigtay laba go’aan difaaceeda garabka bidix ee reer Brazil Alex Sandro.
Kooxda lagu naaneyso marwada duqda ah ayaa dooneysa in Alex Sandro uu saxiixo heshiis cusub, maadaama uu qandaraaskiisa haatan dhacayo 2020-ka, ama gabi ahaanba ay iska iibiyaan xili ciyaareedka soo aadan.
Kooxaha Chelsea, Manchester United iyo Manchester City ayaa heegan ugu jira saxiixa Alex Sandro oo xiiseenaya inuu ka ciyaaro mar uun horyaalka Premier League, sidaasi darteed Juventus ayaa isku dayi doonta inay cusbooneysiiso qandaraaskiisa ama ay iska iibiso xagaaga.
Ciyaaryahanka reer Brazil ayaa lala xiriirinayay inuu u dhaqaaqayo England tan iyo sanadkii 2017, hadana wuxuu go’aansaday inuu sii joogo magaalada Turin, balse wali ma uusan saxiixiin heshiis cusub.
Shalay ayay ahayd kadib markii uu xaqiijiyay daafaca bidix ee reer Brazil inuu doonayo ka ciyaarista horyaalka Premier League, sida laga soo xigtay wargeyska “TuttoSport” ee dalka talyaaniga, kooxaha Chelsea, Man United iyo Man City ayaa wada xiiseenaya inay sameeyaan saxiixa laacibkan.
Inkastoo qandaraaskiisa uu ka harsan halsano, hadana Juventus ayaa wali waxay saxiixa Alex Sandro ku qiimeeneysaa aduun dhan 60 milyan euro.